Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Fahitana divay
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Tamin'ny hetsika vao tsy ela izay nanambara ny fahazoana ny The Robert Parker divay fitarihan'i Michelin Guides, ny mpandinika divay dia nanolotra divay vitsivitsy nankafizin'izy ireo manokana nandritra ny taona 2019 ary nozaraina ho santatry ny hetsika "Matter of Rasa",
Raha 10 divay nisy, ny tiako indrindra dia:
2015 Domaines Lupier La Dama, Navarra, Espana. Organika sy biodinamika. Voaloboka: grenache.
La Dama dia an'i Enrique Basarte sy Elisa Ucar. Ity orinasa famokarana divay kely ity dia any San Martin de Unx, faritanin'i Navarra, Espana.
Any Espana, Grenache (Garnacha) no karazana voaloboka mena nambolena faharoa. Ao amin'ny nosy Sardinia, ny voaloboka dia fantatra amin'ny anarana hoe Cannonau ary inoana fa avy tany io voaloboka io ary nentin'ny Aragoney nibodo ny nosy tany Espana ny 14th taonjato. Ao amin'ny 19th phylloxera taonjato nitondra soa ho an'ny Garnacha satria potika ny voaloboka teratany; na izany aza, ny Garnacha matanjaka dia afaka nameno ny tanimboaloboka sy namelombelona ny indostrian'ny divay.
Ny karazany Garnacha dia mahery sy mateza, manohitra ny rivotra sy ny haintany ary mety amin'ny toetr'andro maina. Mitombo matetika any amin'ny tontolo mafana, ny haavon'ny alikaola avy amin'ny grenache dia mety ho avo, matetika lehibe kokoa noho ny 15 isan-jato ABV. Ny hoditra dia manana hoditra manify ary masaka amin'ny faramparan'ny vanim-potoana maniry, na dia mety miovaova aza ny asidra sy ny tannina arakaraka ny fisondrotana sy ny haavon'ny vokatra.
La Dama dia divay mena vita amin'ny voaloboka Garnacha voafantina tamin'ny tany 15 samy hafa misy voaloboka 75 taona. Ny sasany amin'ireo voaloboka dia nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 20th taonjato, nitombo tamin'ny tany samy hafa, miaraka amin'ny orient orient sy ny haavony samihafa 400 - 750 metatra, ary maneho ny toetran'ny terroir-ny. Ny divay dia antitra mandritra ny 14 volana ao anaty barila hazo terebika 700, 500 ary 300l frantsay
Faly ny maso noho ny loko mena robina manjary mainty. Ny orona dia mahita fofona ravin'ny felam-boninkazo, hodi-boasary, anana, serizy ary hazo lena. Ny lela dia mahazo traikefa taninina sy sombin-bato ho fototry ny mainty hoditra, hoditra, paraky ary hoditra. Ny farany maina maina mamonjy serizy - ness sy mineraly izay tsy hay hadinoina. Ity divay ity dia mifangaro tsara amin'ny hena nandrahoina, namboarina ary natsatsika, anisan'izany ny henan'omby, henan'omby, henan-kisoa, akoho ary lalao. Izy io koa dia misakaiza amin'ny cassoulet ary tsy dia misy ratra amin'ny sakafo aziatika. VAKIO NY ARTICLE TRANO AO WINES.TRAVEL.